Drafitra manam-pahaizana navoaka ho an'ny Survival momba ny fizahan-tany aorian'ny Coronavirus
Home » Lahatsoratra farany farany » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Drafitra manam-pahaizana navoaka ho an'ny Survival momba ny fizahan-tany aorian'ny Coronavirus
Airlines • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana US • fanabeazana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Safety • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Dr. Peter Tarlow an'ny SaferTourism dia manana tolo-kevitra momba ny manam-pahaizana amin'ny antsipiriany ho an'izay mikasa ny hamerina ny toerana alehany na orinasany fizahan-tany aorian'ny Coronavirus. Dr. Tarlow dia namoaka lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe "Ahoana ny fiantraikan'ny pandemioma manaraka amin'ny indostrian'ny fizahan-tany eran-tany" tamin'ny taona 2009. Ny lahatsoratra anio dia miorina amin'io ary hanome lalana ho an'ny tanjona sy ny fizahantany fizahantany.
Tao amin'ity lahatsoratra ity dia nanoratra i Dr. Tarlow: “Ny fizahan-tany manerantany dia miatrika fanamby tsy tambo isaina manerantany raha misy areti-mifindra manerantany. Anisan'ireny ny: ny mety hisian'ny quarantine toerana, ny tahotra hampiasa seranam-piaramanidina sy ivon-toeram-pivoriana marobe, tahotra ny tsy hahalala izay hatao raha sendra aretina any an-tany hafa, ny filàna fiantohana ara-pitsaboana manerana ny tany.
Torolàlana ho an'ny fahavelomana ary hanombohana indray ny toerana fizahan-tany na orinasa:
Nanoratra ny namana iray any India fa hiadiana amin'ny virus dia nanangana laboratoara fitiliana ny governemanta indiana ary namorona fampielezan-kevitra goavana avy amin'ny fahitalavitra sy radio ka hatramin'ny gazety ary na ny finday aza mba hampianarana ny besinimaro amin'izay tokony hatao sy izay tsy tokony hatao. Ohatra, raha misy olona any India miantso laharana amin'ny findainy dia mandre hafatra voalohany momba ilay virus izy ary aorian'ny fandrenesana ilay hafatra vao miantso ilay olona tadiavina ilay telefaona. Tany am-piandohan'ny sekoly sy oniversite nikatona i India, ny fanadinana nahemotra ary ny maha ivon-teknolojia avo lenta azy dia nandrisika ny isan'ny olona betsaka indrindra hiasa an-trano. India koa dia iray amin'ireo toerana fialamboly voalohany nanakatona. Ny serivisy ilaina, toy ny sakafo sy ny fitsaboana dia misy ary ny ankamaroan'ny olona dia toa tsy manana olana amin'ny fahazoana kojakoja ilaina isan'andro.
Noho ny Covid-19, firenena maro manerantany no nahita fomba hitondrana ireo mpizahatany mody na namporisika ireo tsy olom-pirenena na mponina hijanona lavitra. Ireo firenena manerana an'i Eropa, Amerika, Azia ary Moyen Orient dia tsy vitan'ny hoe nanidy ny sisintaniny ihany fa koa ny bar sy trano fisakafoanana, klioban'ny alina, hetsika ara-panatanjahantena, ary koa ireo fotoam-pivavahana. Ny teny hoe "fialofana-amin'ny-toerana" dia nanjary nalaza hatraiza hatraiza. Ireto politika "fialofana-in-toerana" ireto dia izao de rigueur any amin'ny ankamaroan'ny Eropa sy Azia ary ny faritra maro any Amerika Latina. Saika nijanona tanteraka ny indostrian'ny fizahan-tany niaraka tamin'ireo mpitatitra fiaramanidina nanapaka ny fandaharam-potoanan'ny sidina sy ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsakany sy an-davany.
Taorian'ny fanafoanana ny ITB dia nanontany an'ireo mpandraharaha fizahan-tany sy matihanina eran'izao tontolo izao izahay hoe inona ny sosokevitra mety ananany. Ity manaraka ity dia fitambaran'ny hevitra naroson'ny matihanina momba ny fizahantany. Ity ambany ity ny famintinana ireo hevitra voatonona matetika. Ity lahatsoratra ity dia manolotra ireo hevitra ireo amin'ny filaharan'ny abidia ary tsy maneho ny fisainan'ny olona matihanina.
Manafoana ny fanafoanana sy fanovana sarany
Lazao izay ataon'ny orinasanao hiarovana ny fahasalaman'ny besinimaro.
Mamolavola drafitra fanarenana ankehitriny amin'ny vanim-potoana fahavaratra sy fararano. Betsaka izay nanafoana ny drafitra ho an'ny lohataona no mety te-hanavao ny diany raha vao tonga any amin'ny tampony ny areti-mandringana
Amboary ny fizahana orana "virus", izay ahafahan'ny olona mangataka fanemorana fa tsy fanafoanana
Amporisiho ny fanemorana fa tsy fanafoanana. Ataovy mora ny manemotra sy mampiseho amin'ny olona fa rehefa afaka ny krizy dia mbola ho eo ihany ianao ho azy ireo
Ampirisiho ireo mpiara-miasa aminao amin'ny sehatry ny dia ary ampahatsiahivo azy ireo fa miaraka isika rehetra ao
Manolora fikarakarana manokana momba ny fahasalamana raha toa ka tokony hajanona ho karamanty ilay olona na hijanona tsy misy ny sidina
Vantany vao vonona ny vaksiny dia alao antoka fa hampahafantarinao ny besinimaro ny fisiany
Ilaina ny fomba fijery tsara sy ny fampifanarahana. Handalo ny viriosy ary ny fihetsika manorina dia hamporisika ny olona hamandrika ny serivisinao rehefa vita ny krizy
Mampiroborobo ny hetsika ivelany sy ny halavirana ara-tsosialy toy ny valan-javaboary misy ny loza ateraky ny hetsika ivelany miaraka amin'ny fanalavirana ny fiaraha-monina ka hihena ny loza ateraky ny fifindra-monina
Amporisiho ny dia amin'ny taona ho avy. Makà famandrihana aloha miaraka amin'ny zony hanafoanana raha ilaina
Omeo fampahalalana marina sy vaovao
Apetraho amin'ny fomba fijery ny Covid-19 amin'ny fampitahana azy amin'ny pandemika hafa ary fantaro hoe inona ny fomba fanao tsara indrindra avy amin'ireo pandema taloha.
Raiso ny fifehezana ary mijoroa tsara. Mila mahatsapa ny mpitsidika fa ny matihanina amin'ny fizahantany no miadidy ny orinasany / fananany
Lazao ny marina, amin'ny fotoana mahavery ny fahatokisanao anao dia very ny zava-drehetra ary raha mampanantena zavatra ianao dia manatanteraka izany fampanantenanao izany,
Miara-miasa akaiky amin'ny governemanta nasionaly, isam-paritra ary eo an-toerana
Miara-miasa akaiky amin'ireo mpiantoka fitsangatsanganana ary manome fiantohana fitsangantsanganana tsara indrindra sy malefaka indrindra azo atao
Miaraha miasa amin'ny mpanjifa hitazomana farafahakeliny ny risika sy fatiantoka ary asehoy ny fomba famerenana miverina ny dia amin'ny toerana iray na amin'ny toerana vaovao raha azo atao.
Mandrosoa: Mitady fanarenana
Angamba ny zava-dehibe indrindra tokony hotadidina dia ny Covid-19 no hiala. Tahaka ny nahasitranan'i Eropa tamin'ny Pesta Mainty sy ny fizahan-tany maro dia sitrana tamin'ny areti-mandringana tamin'ny taonjato roa-polo amby roapolo, dia hisy ny fotoana hitsaharan'ny kaomandy fialofana, hisokatra ny fisakafoanana sy ny hetsika ara-panatanjahantena ary hisokatra ny seranam-piaramanidina Ny sambo dia hiverina amin'ny fandaharam-potoana mahazatra kokoa. Midika izany fa ny fizahantany sy ny indostria mifandraika amin'ny dia dia tsy maintsy tratrarina amin'ity fanidiana voalohany ity. Ireto ambany ireto misy hevitra fohy sy maharitra mety ilaina.
Amin'ny fotoana fohy:
Orinasa maro no hanana olana amin'ny fivezivezena. Ataovy farafahakeliny ny fandaniana. Miresaha amin'ireo andrim-bola mba hitadiavana fanampiana ara-toekarena na fanampiana ary hitahiry vola lehibe arak'izay azo atao
Alao ilay teny hoe misokatra amin'ny asa ianao na hisokatra haingana araka izay tratra
Mamolavola laza izay milaza amin'ny mpiasao fa "raharaham-barotra izahay". Ireo no olona hanampy ny orinasanao hijoro amin'ny tongotra rehefa nihena ny areti-mandringana. Hamarino tsara fa ny mpiasa dia mahalala fa miahy ianao ary hanao izay rehetra azonao atao hanamaivanana ny tahotra sy ny fanaintainany.
Amporisiho ny fahasalamana. Manana mpanadio tanana, fonon-tanana vita amin'ny fingotra ary rano tavoahangy misy, faritra madio. Ampahatsiahivo ny olona fa ny lafo dia tsy midika hoe tsara. Savony sy rano apetaka amin'ny lafiny roa amin'ny tanana ampiarahana amin'ny fikosehana roapolo segondra farafahakeliny no mazàna amin'ny ankamaroan'ny tranga.
Asehoy ny sary tsara sy mahasalama amin'ny fikarakarana ny fahasalaman'ny mpiasa ary tsarovy fa ny fitantanana dia misy olombelona ihany koa! Amporisiho ny olona hiala sasatra, hisotro rano be, hampihena ny alikaola ary hijanona tsy hifoka, hihinana sakafo voalanjalanja ary hihinana vitamina C & D miaraka amin'ny sakafo. Manantona mpitsabo aretin-tsaina momba ny sakafo tsara indrindra amin'ny vatanao sy ny fanaingoana anao.
Amporisiho ny haino aman-jery vaovaonao any an-toerana mba hanasongadinana, isaky ny azo atao, miaraka amin'ny alalàn'izy ireo, ireo olona izay nanana virus Covid-19 ary velona izao.
Alao antoka fa fantatry ny mpandeha fa ny vondrom-piarahamoninao na ny orinasanao dia manao izay rehetra azo atao mba hiantohana ny fandriam-pahalemana ao anatin'izany ny fanapoahana toerana eny amin'ny toerana malalaka ho an'ny daholobe, ny fanadiovana fanampiny eo anelanelan'ny sidina, ny fisian'ny trano vaovao, na ny seza sy birao aza.
Ataovy mazava tsara fa ny orinasanao dia miara-miasa amin'ireo tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana eo an-toerana ary tsy vitan'ny hoe manao izay angatahin'izy ireo aminao fotsiny ianao fa manao tatitra amin'izy ireo izay mety ho loza ara-pahasalamana mety ho tsy noraharahian'izy ireo.
Tamin'ny lahatsoratra 2009, nohamafisiko ity manaraka ity. Ity ambany ity ny famintinana an'ireo sosokevitra ireo, izay maro no manan-kery amin'ity krizy ity ankehitriny.
Mamolavola drafitra drafitra mialoha sy aorian'ny post-pandemière izao. Aza miantehitra amin'ny fanafody iray fotsiny hitondra anao amin'ny fahasitranana. Aleo mandrindra ny doka sy dokambarotra ataonao amin'ny programa mandrisika anao ary amin'ny fanatsarana ny serivisinao.
Hamafiso ny tsara fa tsy ny ratsy. Rehefa avy krizy tsy miketrona fa mitsiky!
Hamarino tsara fa manana drafitra ianao amin'ny tsy fahatongavan'ireo mpiasa mandritra ny areti-mandringana sy ny rafitra ahafahan'ny mpiasa miasa hikarakara ny fianakaviany.
Mamolavola drafitra fifampiraharahana amin'ny haino aman-jery. Omeo haingana dia haingana ny fampahalalam-baovao.
Aza manipy vola fotsiny amin'ny krizy. Ny fitaovana tsara dia mitana andraikitra lehibe, fa ny fitaovana tsy misy fikasihan'olombelona dia hiteraka krizy hafa ihany. Aza adino velively fa ny olona no mamaha ny krizy fa tsy ny masinina.
Mampalahelo fa ny Areti-mandringana 2020 dia tsy ho ny krizy farany hiaina ny indostrian'ny fizahantany. Miaraka amin'ny dia iraisam-pirenena, kely loatra ny fiarovana ny sisin-tany, ary ny mpiasan'ny fifindra-monina tsy dia zatra fiofanana momba ny olana ara-pahasalamam-bahoaka, dia afaka manantena izao tontolo izao mifandraika fa mety tsy ny areti-mandringana Covid-19 no farany. Ny krizy Covid-19 dia nampianatra antsika betsaka momba ny toerana ilain'ny indostrian'ny fizahantany hanamafisana ny fahalemena efa misy. Anisan'izany ireto:
Fanadiovana tsara kokoa amin'ny lafiny fitateram-bahoaka rehetra
Fanomanana sakafo azo antoka kokoa
Fiantohana ny fahasalaman'ny mpiasa
Fanofanana sy fanaparitahana ireo tobin'ny polisy fizahan-tany
Manova ny sehatry ny fizahantany ho lasa fizarana fahaizan'ny fizahantany manana fahalalana bebe kokoa momba ny olan'ny fahasalamam-bahoaka
Famerenana ny lanjan'ny fetra nasionaly
Fanomanana ireo mpitsidika tratry ny fitrandrahana quarantine tsy ampoizina
Ny fampidirana ny drafi-pahasalamana momba ny fizahantany amin'ny drafitra fiarovana ny fizahantany
Manome toky amin'ny besinimaro fa ny indostrian'ny fizahantany dia nianatra ny lesona tamin'ny Covid-19 ary hampihatra ireo lesona ireo amin'ny politika mahazatra.
Ny zava-dehibe indrindra: mianara amin'ny lasa ary mamorona ho an'ny ho avy.
Fampahalalana bebe kokoa momba ny fomba hanatonana an'i Dr. Peter Tarlow ary miara-miasa amin'ny Safer Tourism amin'ny fanarenana fizahan-tany.